Sonos Beam 2, markii ay u muuqatay wax aan suurtagal ahayn in la hagaajiyo [Dib -u -eegis] | Wararka Gadget
Baaxadda wax soo saarka Sonos waa ficil ahaan kaamil, aan aad u dheerayn, oo aan aad u gaabin, diirada saaraya baahiyaha daboolida iyo faan la'aan. Alaabadoodu kuma lumin liistada ama ka dhigaysa macaamilka shaki, waxay ku kooban yihiin bixinta dalab dalab. Si kastaba ha ahaatee, cusboonaysiinta badeecadeeda waa joogto sababtoo ah xitaa haddii badeecadu ku dhowdahay dhammaystir, wax walba waa la hagaajin karaa.
Waxaan falanqeynaynaa Sonos Beam 2 cusub, jiilka labaad ee wax soo saar ku dhawaad ​​kaamil ah iyo tusaalaha ah in wax walba la horumarin karo. Nala soo socodsii faahfaahin kasta oo ku saabsan Sonos -kan cusub ee dhexda dhexe ee sanqadha leh oo leh kala -duwanaansho iyo tayo aan hore loo arag, miyay suurtogal ahayd in la hagaajiyo kii hore?
Sida marar badan oo kale, waxaad fiirin kartaa unboxing -ka oo dhammaystiran, qalabkiisa iyo dhammaan habraaca qaabaynta ee Sonos Iyada oo loo marayo kanaalkeena YouTube kaas oo aan ku tusno faahfaahinta ugu dhow ee alaabta.
1 Naqshad, la garan karo laakiin ka samaysan
3 Ku habboon TV -ga, laakiin sidoo kale muusikada
4 Sonos dhan, oo leh waxa ku jira
Naqshad, la garan karo laakiin ka samaysan
Haddii aad meel fog ka eegto, jiilka labaad Sonos Beam ayaa laga yaabaa inuu u ekaado sidii jiilkii koowaad, runtiina sidaas ma aha. Sidaad si fiican u ogtahay, Sonos wuxuu muddo dheer ka tagay dharkii aaladda, qalab ay kuwayaga oo la socday Sonos muddo dheer ogaa inay dhibaato ku noqon karto xagga nadaafadda.
Munaasabaddan, Sonos wuxuu habeeyay badeecadda kaliya ee ka tagtay iyada oo aan la aqbalin buug -yaraheeda. Sonos Beam 2 waxay ka heshaa daloollo taxane ah xagga hore oo siiya adkeynta badeecada oo waliba dhigta agagaarka alaabada Sonos ee heerka naqshadeynta. Isbeddelku sida uu u yar yahay, boodboodku wuxuu ka dhigayaa mid fudud oo casri ah.
Midabada la heli karo: Madow iyo caddaan
Cabir: 69 x 651 x 100 mm
Miisaanka: 2,8 Kg
Saldhigga sare wuxuu wali ku hayaa qaab -dhismeedkii hore isagoo weli ku jira kontaroolada taabashada badan ee warbaahinnada sida caadiga ah ee Sonos iyo laba LED oo la habeyn karo, xaaladda Sonos lafteeda iyo tilmaame hawlgalka kaaliyaha codka. Dhanka hore, astaanta Sonos waxay sii wadaa taajkii dhabarkana waa isku xirnaanta. Hadda Sonos Beam way fududahay in la nadiifiyo oo waafajiyo waqtiyada, jebinta odhaahda, maxaa yeelay qaybaha labaad waxay noqon karaan kuwo wanaagsan.
Waxaan ku bilaabaynaa kabka farsamada kaas oo mas'uul ka ah samaynta jiilkan labaad ee Sonos Beam inuu u shaqeeyo sida qaanuunka Sonos uu farayo:
Cod -bixiyeyaasha dhijitaalka ah ee Heerka D ee shan Class D ayaa lagu hagaajiyay naqshadda gaarka ah ee Sonos Beam 2
Afar darawal oo dhexdhexaad ah
Saddex hiitarka dadban
Tiro ka kooban afar makarafoon oo masaafo dheer leh
Waxaas oo dhan waxaa weheliya stereo PCM borotokoollada, Dolby Digital, Dolby Digital +, Dolby Atmos, Dolby True HD, Multichannel PCM iyo Multichannel Dolby PCM. Waxaas oo dhan waxaa lagu aqoonsan karaa dalabka Sonos, kaas oo tilmaami doona nooca codka ee Sonos Beam uu hadda sifeynayo.
Heerka wax -ka -qabadka, maskaxda jiilka labaad Sonos Beam waxay koraysaa 40% awoodeed marka loo eego kii ka horreeyay, taasna waxay ku fuuleysaa 1,4 GHz Quad-Core CPU oo leh naqshad A-53 iyo 1GB ee xusuusta SDRAM oo lagu daray 4GB ee xusuusta NV.
Si aad ugu xirto ilaha maqalka, oo caadiyan ahaan doona telefishanka, mar kale ku sharad farsamada HDMI ARC / eARC, iyo sidoo kale isku xirka WiFi oo la jaan qaada 2,4 GHz iyo 5 GHz band, sidoo kale leh deked 10/100 p EthernetSi toos loogu xiro router. Intaa waxaa sii dheer, sida ka dhacday inta badan badeecadaha Sonos, waxaan leenahay is waafajinta borotokoolka Apple AirPlay 2, sidaa darteed is -dhexgalka alaabada sumadda Cupertino ayaa ahmiyadda koowaad leh, iyada oo aan dib -u -dhac lahayn ama khasaare tayo leh.
Ku habboon TV -ga, laakiin sidoo kale muusikada
Sidii dhacday Beamkii hore, waxaan wajahaynaa badeecad wareegsan oo si fiican looga fikiray si aan ula socono telefishankaaga. Waxay leedahay qalab qaataha IR oo kuu oggolaanaya adiga, adoo adeegsanaya codsiga Sonos S2 oo ay weheliso nidaamka HDMI ARC / eARC, si aad u maamusho TV -ga si fudud oo aad u sameyso kontoroollo badan. Adigoo gacanta ku haya telefishankaaga waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah u maamusho mugga baarka. Waxaas oo dhan waxaa lagu daray suurtagalnimada in lagu xakameeyo baarka iyada oo loo marayo suufka taabashada sare ama codsiga Sonos.
Waxaad ku habeyn kartaa Sonos Beam 2 oo leh dhawaaqyo ku wareegsan iyada oo loo marayo Sonos One iyo Sonos Sub kala duwan.
Waxaan ka yeelnay dhawaaqa hareeraha iyada oo loo marayo shanta cod -weyne ee dhijitaalka ah iyo is -waafajin buuxda oo leh heerka dhawaaqa ugu fiican ee arrintan la xiriira, Dolby Atmos, oo ay u hesho hal -abuur cusub marka loo eego jiilkii hore.
Waqtigan xaadirka ah Sonos wuxuu xalliyay dhibaatada ugu weyn ee leh baararka dhawaaqa badan isagoo bixiyay wada -hadal dhab ah oo cad. Waxaad kicin kartaa shaqada kor u qaadista codka si aad si fiican u maqasho wadahadalada haddii ay dhacdo ficil xad -dhaaf ah ama aad dhegeysato waxa ku jira oo aad u hooseeya. Marka la eego, jiilka labaad Sonos Beam wuxuu u shaqeeyaa sidoo kale jiilka kowaad.
Waad qiyaasi kartaa in tani ay ciqaabayso muusikada, wax ka fog runta ma jiraan. Sonos Beam 2 Tani waa wax soo saar hybrid, waana inkasta oo uu yahay bar dhawaaq oo diiradda saaraya TV -ga, haddana si fudud oo raaxo leh ayaa loogu adeegsan karaa sidii muusik muusig. IYOCodku waa stereo oo waa cad yahay maadaama processor -kiisu tilmaamayo nooca nuxurka aan ciyaareyno.
Cod si fiican loo habeeyay oo haddii aan dib u habaynno TruePlay waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxaysano dhammaan safafka iyadoo aan loo eegin goobta.
Bartamaha waxaa lagu hagaajiyaa xitaa inta jeer ee ugu hooseysa, tayada codka markaan ka hadlayno muusiggu uma dhigmo baararka dhawaaqa ee kale maxaa yeelay waxaa laga daawaday telefishanka.
Waxaan leenahay a jawaab cad oo ku socota jadwalka sare iyo soo noqnoqoshada hoose ayaa si weyn loo xoojiyay, si daacad ah qolka cabbirka caadiga ah ama qolka fadhiga waxaan ka helaa subwoofer gooni ah oo la bixin karo.
Sonos dhan, oo leh waxa ku jira
Sida caadiga ah, Sonos wuxuu gebi ahaanba ka fogaaday Bluetooth badeecadan oo had iyo jeer ka shaqaysa isku xirka WiFi, Tani waxay u oggolaaneysaa kaaliyayaasha ugu waaweyn ee dalwaddu inay ku xirnaadaan, in kasta oo aan inta badan u adeegsanno Alexa, iyo sidoo kale is -dhexgal buuxa iyada oo loo marayo HomeKit oo leh heerarka AirPlay 2.
Waxaan leenahay, sidee bay u noqon kartaa si kale, xiriir degdeg ah oo lala yeesho Spotify, Muusikada Apple iyo liiska daraasiin bixiyayaal ka kooban warbaahinno badan.
Dejinta, sida aaladaha kale ee Sonos, waa sida fudud sida isku xirka, furitaanka codsiga Sonos, laga heli karaa labada Android iyo macruufka oo riix «xiga». Khibradda isticmaalaha Sonos ayaa had iyo jeer ku fiican arrintan.
Sonos 2 -kan cusub wuxuu daboolayaa cilladaha yar ee nuqulkii hore, kaas oo aan lahayn markay dhasheen, laakiin wuxuu ku horumariyey waqtiga iyo horumarka farsamada. Hadda ku biir Dolby Atmos for abuuraan saameyn 3D ah oo aad ugu filan in lagu raaxeysto dhammaan noocyada maadada, Waxay bixisaa naqshad la socota wax walba iyo qiimo taas oo, iyada oo la tixgelinayo wax -ku -oolnimadeeda iyo kalsoonida ay Sonos ku abuurto isticmaaleyaasheeda, si weyn loo hagaajiyay.
Qalabka 'Actualidad Gadget' waxaan had iyo jeer ku sheegnaa in Sonos Beam laga yaabo inay tahay badeecada wareegsan ee dheelitirka tayada / qiimaha Sonos, iyo jiilkan labaad, oo ku sii jiraya 499 euro, ma noqon karto mid ka yar.
Maaddooyinka iyo naqshadeynta bixiya adkeyn iyo dareen "Premium" ah
Kala duwanaanshaha isku xirnaanta iyo iswaafajinta
Fududeynta qaabeynta iyo waayo -aragnimada isticmaalaha
Tayada codka ee cajiibka ah oo leh heerka Dolby Atmos
Nooca cad wuxuu leeyahay saldhig madow
Mararka qaarkood kuma soo muuqdo Spotify Connect sabab la'aan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sonos Beam 2, markii ay u muuqatay wax aan suurtagal ahayn in la hagaajiyo wixii hore u jiray [Dib u eegis]
Jabra Elite 7 Pro, dib-u-eegis farsamo ku raran [Dib u eegis]